Bluepicker: mifandray amin'ireo fitaovana Bluetooth misy fihetsika (Cydia) | Vaovao IPhone
Iray amin'ireo zavatra tena kiana ny olona raha ny amin'ny fividianana iPhone na iPad dia ny tsy fahafahan'ny famindrana karazana rakitra amin'ny alàlan'ny Bluetooth. Ary, na dia manana fifandraisana Bluetooth aza ny iDevices, dia azo ampiasaina raha tsy mampifandray fitaovana multimedia izay mampifandray ny feo / antso amin'ny fitaovantsika. Na izany na tsy izany, raha te-hamindra rakitra amin'ny alàlan'ny Bluetooth an'ny solo-sainao ianao, dia misy tweaks ao amin'ny Cydia mamela ity dingana ity hisintona. Anio dia hasehoko anao ny tweak antsoina Bluepicker, izay mamela ny mpampiasa hampifandray avy hatrany ny iPad amin'ny fitaovana Bluetooth amin'ny alàlan'ny fanaovana fihetsika Activator. Tena ilaina io! Aorian'ny fitsambikinana ny asany rehetra sy ny asany rehetra.
Mifandray amin'ny fitaovana Bluetooth amin'ny alàlan'ny Bluepicker sy Activator
Toy ny mahazatra, ny zavatra voalohany ilaintsika dia ny fametrahana ny tweak apetraka; raha izany dia, Bluepicker via Cydia. Ny fiovana dia eo am-pamoloana an'i BigBoss, noho izany dia tsy mila manampy loharanom-baovao akory ianao hahafahana mankafy an'ity tweak mahafinaritra resahanay ity.
Raha vantany vao vita ny famerenanana dia tokony hampavitrika ny fihetsika izay hampihetsika ny Bluepicker isika. Hahafahantsika manao izany Activator (hapetraka miaraka amin'ny Bluepicker izy io raha tsy anananao) ary apetraho ny fihetsika mety indrindra amin'ny fampiasana omenao ny fanovana. Raha ny amiko dia nisafidy ny "Swipe the bar status na aiza na aiza ho amin'ny ankavanana" aho mba hihetsika Bluepicker.
ZAVA-DEHIBE: Ilaina ny mampandeha ny Bluetooth (amin'ny alàlan'ny Control Center, ohatra) mba hiasa tsara ny Bluepicker.
Manatanteraka ny fihetsika ataonay izahay ary hiseho ny varavarankely toa ilay hitanao eo ambony. Bluepicker dia hampiseho amintsika ireo fitaovana rehetra izay nifandray tamin'ny alàlan'ny Bluetooth tamin'ny iPad. Raha te hifandray amin'ny iray amin'ireo fitaovana ireo dia kitiho fotsiny ny anarany (ny fitaovana Bluetooth dia mila velomina ary hita, mazava) ary avy hatrany, ny fitaovana dia hifandray amin'ny iPad amin'ny alàlan'ny tweak: Bluepicker.
Fanazavana fanampiny - Celeste 2 misy izao. Famindrana rakitra amin'ny alàlan'ny Bluetooth (Cydia)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Bluepicker: mifandray amin'ireo fitaovana Bluetooth misy fihetsika (Cydia)
Ity dia ho Vinavinaina, ny toetr'andro eo amin'ny Lockscreen anao (Cydia)
SubtleLock dia manova ny fisehon'ny efijery hidinao (Cydia)